Uncategorized | Umesh's Blog
अल्वीदा उत्सव दाई
हिजो राती सामान्य समय भन्दा बढि नै काम गर्दै बसीरहेको थिएँ । करिब रातको दुई बजेको हुँदो हो, अब सुत्नुपर्ला भनेर ब्राउजर क्लोज गर्ने क्रममा लगआउट नभएको मेरो फेसबुक भएको ट्याबमा पुगेँ । अचानक न्यूजफीडमा एकजनाको स्ट्याटस देखेँ, चिनैकै मान्छेको फोटो हालेर क्याप्सन लेखेको रैछ । रेस्ट ईन पिस । स्क्रोल डाउन गर्न मन लागेन
यौटा अत्भुत सिकाई
आज लेख्नलाई निक्कै कष्ट गर्दैछु । केही छ कि यो दिमागमा भनेर । दिमाग ले शब्दहरुलाई बगाउनै खोज्दैन । मनमा कुनै विषय छनोट गरेर लेखौँ भन्ने पनि लागीरहेको छ । तर अहँ कुनै पनि विषय फुर्दैन । के म देशको बारेमा लेखौँ ? अहँ , मेरो देशको बारेमा मलाई कति पो थाहा छ र लेखौँ
धेरै समय भएको थियो उ सँग भेट नभएको, भ्यालेन्टाईन डे पनि नजीकिरहेको थियो । म रुममा अफिसबाट आएर पल्टिएको थिएँ । दिनभरको अफिसको कामले थकाई लागीरहेको थियो, दिनभर कम्प्युटरको स्किृन अगाढी बसेर लजिक लगाउँदा लगाउँदा दिमाग नै भारी भएको भान हुन्थ्यो । अचानक मोबाईलको रिङ्ग बज्यो । ट्वार्र ट्वार्र । मोबाईलमा पनि डिफल्ट जे रिङ्गटोन
सबै सामान्य थियो । असामान्य जस्तो केहि पनि लागेको थिएन । कुरा २०७२ साल वैशाख १२ गतेको हो, हामि दाजु भाई सधैँको सनिबार झैँ कोठामा खाना पकाएर खाने तरखरमा थियौँ । भाईले खाना खाईसकेको थियो । मेरो अल्छि बानि अलि ढीलो खाँदै थिएँ । ल्याप्टपमा स्टिभ जब्सको स्टे हंग्री स्टे फुलीस भन्ने स्ट्यान्डफर्ड युनिभर्सिटिमा दिएको
बाहिर टन्टलापुर घाम लागेको छ । न त जाडो न त गर्मी । मौसम ठिक्कको छ । कुनै क्याफेको भित्र चिया पिउँदै सोचमग्न छ यो दिमाग । विचारको डल्लो हो कि जस्तो पनि भईरहेको छ । विचारहरु समुन्द्रमा छाल आएझैँ आउँदै जाँदै गरिरहेका छन् । म विचारमा मात्र केन्द्रीत भएर देखिरहेको छु । कैले कस्तो
आखीर म को हुँ ?
ठ्याक्कै कृष्ण जस्तो देखिन्थ्यो । चारवटा हात थिए । हातमा तरबार लिएको थियो । दाह्री भने लामा लामा थिएँ । तामिल फिल्मको हिरो जस्तै, कालो वर्णको थियो । दाँत सेता सेता, सगरमाथा भन्दा चम्कीला ।
मध्यरातको त्यो समय, डर डर लाग्यो । कतै यो भुत त हैन ? मुटु जोड ले धड्किन थाल्यो । धत् भुत सुत पनि हुन्छ आजकालको जमानामा पनि । वाईयात । अनि के हो त ? चार वटा हात छन् । मान्छेको चारवटा हात कसरी भए ? पक्का पनि यो भगवान् होला । धत् भगवान् कसरी हुन सक्छ । हेर्दा मान्छे जस्तै छ । ठिङ्ग उभिएको थियो । हातमा चुरोटको ठुटो जस्तो पनि देखिन्थ्यो । तर बलेको भने थिएन ।
बोलौँ कि भने । बोल्ने हिम्मत आएन । विस्तारै सरक्क सरक्क गर्दै हिडेँ । मुर्ति जस्तो पनि देखिन्थ्यो । डराउँदै डराउँदै हिड्दैँ थिएँ ।
“उमेश, एकछिन पख । ”
यौटा पत्र तालीवानीलाई
सलाम वलीकम् तालिवान बन्धु,
हत्यामा मारिएका एक विद्यार्थीको जुत्ता
मलाई थाहा छ, तपाईहरुको र मेरो देश भिन्न छ, भेष भिन्न छ, संस्कार भिन्न छ, सम्बन्ध भिन्न छ, संस्कृति भिन्न छ अनि भुगोल भिन्न छ । म नेपालको यौटा कुनामा बस्ने मान्छे अनि तपाईहरु राजनितीको भिषण क्रान्तिमा होमिनुभएका परिवर्तनकारी पाकिस्तानी व्यक्तिहरु, फरक त छ धेरै तपाईहरु र म मा । गन्दै जाने भने हजारौँ फरक भेटिन्छन् । तर मैले यहाँ तपाईहरु र म मा भएको फरक छुट्याउन लाई भन्दा पनि म भित्र भएको क्रान्तिको परिभाषालाई ध्वस्त पारिदिनुभएकोमा नयाँ परिभाषा खोज्नु हो ।
सम्भावना कहाँ हुन्छ जहाँ केही कुरा पनि हुँदैन
possibility अमेरीका । सुन्दै कति प्यारो लाग्छ, हामीलाई यो नाम । यौटा प्रेम गर्नेले प्रेमीका भने जस्तो । नेपालका यूवालाई मात्रै हैन, सायद संसारका सबै यूवाहरुलाई त्यस्तै लाग्दो हो । थाहा छैन, के छ त्यहाँ? थाहा छैन किन मानिसहरु त्यतिका विधि मरिहत्ते गर्दछन् त्यो मूलुकको लागी । कोही डि.भी. को नाममा त भने कोही अरु
अवेरनेस ईज लाईफ
भर्खरै सन्दीप महेश्वरीको यौटा भिडीयो हेरीसकेको छु । जीवनका यतिका वसन्तहरु पार गर्दा पनि अझै जीवनको अर्थलाई बुझ्न सकेको छैन । बुझ्नलाई खोज्छु, अहँ पटक्कै सक्दीन । मान्छेहरु भन्छन् जीवन बुझ्नलाई हैन, भोग्नलाई हो । आखिर मैले भोगेको जीवन के हो त ? के जीवन यौटा माशुको डल्लो मात्रै हो ? प्रश्नका भारि तेर्सिन्छन् ।
उसको शब्दातीत प्रेम
अमुर्त प्रेम उ भन्दै थिई “तपाईँको यहि बानि त मलाई मनपर्दैन नी । कति भन्यो कैल्यै टेर्ने हैन भन्या । ” उसको आँखामा अलिकति रिस झल्किरहेको थियो । रिसाएझैँ देखिन्थी । फकाउँकी भने तर फेरी त्यो रिस अझै हेरिरहन मन लाग्यो । “कति पटक भनिसके मैले, भन्नुत? कति पटक भन्नु, यसरी अरुसँग तपाई खुलेर बोलेको
अस्थीत्वको गोटी January 17, 2017
अल्वीदा उत्सव दाई June 4, 2016
यौटा अत्भुत सिकाई June 4, 2016
म उ र भ्यालेन्टाइन डे June 4, 2016
एक निमेश June 4, 2016
विचारको डल्लो June 4, 2016
आखीर म को हुँ ? June 4, 2016
यौटा पत्र तालीवानीलाई June 4, 2016
सम्भावना कहाँ हुन्छ जहाँ केही कुरा पनि हुँदैन June 4, 2016
अवेरनेस ईज लाईफ June 4, 2016
उसको शब्दातीत प्रेम June 4, 2016
थालीयो यौटा ब्लग, यौटा लेखन यात्रा June 4, 2016
Really Who am I ? January 1, 2016
The Chunk of thoughts December 31, 2015
SMPP means message protocol, short message protocol,sms protocol
Using try catch in SQL Server stored procedures - Umesh Ghimire | Freelance Wordpress Developer Nepal, Freelance PHP Developer Nepal, Wordpress Developer Nepal, Joomla Developer Nepal, Freelance Software Developer Nepal, Web Developer Nepal,...
Copyright Umesh's Blog 2018 | Theme by Theme in Progress | Proudly powered by WordPress